Nguồn gốc hình thành những ý tưởng kinh doanh tiềm năng, mới lạ | Anybook.vn - Anybook
Nguồn gốc hình thành những ý tưởng kinh doanh tiềm năng, mới lạ | Anybook.vn
Te hanandrana ny tananao amin’ny hetsika ara-barotra ianao nefa tsy hainao ny mamorona hevitra momba ny raharaham-barotra? Ahoana ny fanombanana hevitra fanombohana? Ao amin’ny lahatsoratra etsy ambany, 123job dia hanome ny fampahalalana mahasoa indrindra tadiavinao.
Tanora maro no mitantana orinasa, saingy tsy ny rehetra no tafita. Ny fototry ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan’ny fanombohana dia ny fomba fananganana orinasahevitra ara-barotra mahomby. Na vokatra na serivisy na fomba vaovao ny hevitra dia misy FAHAIZANA, fahalalana sy fahalalana lalina. Noho io toetra manan-danja io, ny ambany 123job dia hizara aminao ny niandohan’ny famoronana a hevitra momba ny raharaham-barotra vaovao sy manana fahafahana lehibe.
1 I. Mamorona hevitra fanombohana
1.1 1. Ho an’ny vokatra sy serivisy manatsara ny fiainana
1.2 2. Fantaro ny karazana vokatra na serivisy
1.3 3. Farito amin’ny fomba tena izy ny olana
1.4 4. Miorina amin’ny sehatra misy
1.5 5. Mibanjina ny ho avy
1.6 6. Ny fikarohana mpanjifa dia dingana tsy azo tsinontsinoavina
1.7 7. Ampiharo amin’ny sehatra hafa ny fahaizanao
1.8 8. Ataovy drafitra ny hevitra iray manontolo
1.9 9. Tezao ny fahaizanao mamorona
1.10 10. Avelao hiala sasatra ny tenanao
2 II. Tombano ny hevitra fanombohana
2.1 1. Tombano ny tanjakao sy ny fahalemenao mifandraika amin’ny drafitrao
2.2 2. Mikaroha hevitra mitovy
2.3 3. Fikarohana mpifaninana
2.4 4. Mitadiava mpiara-miasa amin’ny fiaraha-miasa
2.5 5. Mitadiava mpanjifa mety
2.6 6. Fantaro ny loza mety hitranga sy ny sakana
2.7 7. Famaritana ny maha-mety ny tetikasa
2.8 8. Omeo isa ny hevitrao
3 III. Eo am-pamaranana
I. Mamorona hevitra fanombohana
Hevitra ara-barotra Ny mety dia ny fanalahidin’ny fahombiazan’ny Startups
1. Ho an’ny vokatra sy serivisy manatsara ny fiainana
Iray hevitra momba ny raharaham-barotra amin’ny vokatra na serivisy iray, dia afaka mipoitra ao an-tsainao amin’ny zavatra rehetra, toy ny fisaintsainana ny traikefa, ny lesona momba ny fiainana sy ny ra… HERY, ny fetranao dia handray anjara amin’ny famoronana vokatra sy serivisy tena azo ampiharina. Mba hahazoana vokatra manampy amin’ny fanatsarana ny fiainana, ny fijoroana mafy eny an-tsena dia mitaky anao hanana hevitra ara-barotra famoronanazava-baovao sy mety.
2. Fantaro ny karazana vokatra na serivisy
Rehefa manomboka manao iray hevitra momba ny raharaham-barotra, mila mamaritra ianao raha hifidy vokatra na serivisy ianao. Na izany aza, ny karazanaNy hevitra momba ny raharaham-barotra rehetra dia mitaky fahaiza-mamorona sy fisainana tany am-boalohany, saingy manana ny tanjany sy ny fanamby tokony hodinihinao izy ireo:
Ho an’ny vokatra vaovao dia tsy maintsy mamolavola na manatsara ny vokatra efa misy ianao ary manangana tsipika famokarana ho azy ireo. Na dia lafo aza izany, rehefa mahomby, ny vokatra vaovao dia hitondra tombony lehibe ho anao.
Raha jerena ny karazana mpanome tolotra dia hahita tombony amin’ny vokatra ianao amin’ny resaka tsy mila tsipika famokarana. Na izany aza, tsy maintsy manakarama mpiasa bebe kokoa ianao, satria tsy ianao irery no mpamatsy serivisy.
READ Kỳ Quan Thế Giới Tại Việt Nam - Vẻ Đẹp Độc Đáo Và Kiêu Sa - Đề án 2020 | Anybook.vn
3. Farito amin’ny fomba tena izy ny olana
Mba hamolavolana ny modely ara-barotra tsara indrindra, ny orinasa dia matetika tonga amin’ny tsy fahafaham-po amin’ny zava-misy. Noho izany, ny fitadiavana ny olana dia hanampy anao hiforona hevitra momba ny raharaham-barotra mandaitra kokoa. Angamba, ny tsenan’ny consulting orinasa iraisam-pirenenaRaha mbola tsy nisy nametraka vola dia izay no tsena mety ho anao.
4. Miorina amin’ny sehatra misy
Raha tokony hamaritra ny olan’ny indostria ianao, dia azonao atao ny mandinika ny fomba fiasan’ireo orinasa lehibe. Jereo ny lalana marina ary diniho ny antsipiriany, jereo raha tokony hivoatra bebe kokoa ianaohevitra momba ny raharaham-barotraizany na tsia. Amin’ny maha dingana iray mialoha ny indostria, manampy anao hamorona niche misongadina.
5. Mibanjina ny ho avy
Antsoina hoe reformista ny mpandraharaha mahomby, satria tsy mifikitra amin’ny teknolojia na ny orientation efa lany andro, fa mibanjina ny ho avy ary miasa amin’izao fotoana izao amin’ny tanjona hanompoana ny ho avy. Afaka manao izany tanteraka ianao, amin’ny fametrahana fanontaniana amin’ny tenanao hevitra momba ny raharaham-barotra ho an’ny tenako. Ohatra, amin’izao fotoana izao ny fivoriana na fampianarana an-tserasera dia miha-malaza, mijery ny fironana amin’ny fotoana azonao amboarina. hevitra momba ny raharaham-barotra Orinasa fampiasam-bola manokana amin’ny fananganana sy fandaminana fivoriana an-tserasera.
Hijery misimisy kokoa: Hevitra momba ny fandraharahana famoronana – Ny fanalahidin’ny fahombiazan’ny fandraharahana
Manàna fahitana mialoha ny ho avy ao hevitra momba ny raharaham-barotra Hanampy ny lalanao mankany amin’ny fahombiazana ho malalaka kokoa
6. Ny fikarohana mpanjifa dia dingana tsy azo tsinontsinoavina
Matetika, ny fikarohana tsena dia ampiasaina aorian’ny hevitra momba ny raharaham-barotra efa tafaorina anefa, afaka manao fikarohana aloha ianao mba hahitana marina izay tadiavin’ny mpanjifanao. Miorina amin’ny fanirian’ny mpanjifa sy ny filan’ny mpanjifa, dia hanangana ny hevitra ara-barotra mety ianao. Azonao atao ireto manaraka ireto:
Fikarohana mifototra amin’ny fikarohana: Jereo izay teny fototra tadiavina matetika. Tokony hamaky lahatsoratra bebe kokoa momba an’io teny fototra io ianao, mba hahatakarana bebe kokoa ny olana sy ny hevitra momba ny raharaham-barotra mba hamoronana mora kokoa.
Ankoatra izany, azonao atao ny mampiasa ny serivisy Google Adwords na Bing Ads, izay manampy amin’ny famantarana sy famakafakana ireo fikarohana malaza.
7. Ampiharo amin’ny sehatra hafa ny fahaizanao
FAHAIZANA fa ny sahanao hafa koa dia fomba tsara hampandrosoana ny iray hevitra momba ny raharaham-barotra tonga lafatra. Amin’ny toe-javatra maro, azonao atao ny mampihatra ny fahaiza-manao nianaranao avy amin’ny faritra iray mba hamoronana, fanatsarana, faritra hafa tanteraka. Azo lazaina hoe, Leo Fender – mpanamboatra radio matihanina, na izany aza, noho nyNoho ny fahaizany elektrônika sy ny fanamafisany no namoronany ny gitara elektrika izay malaza ankehitriny.
READ +999 Mẫu Tranh Tô Màu Hình Cây Xanh đơn Giản Cho Bé Mầm Non - Đề án 2020 | Anybook.vn
8. Ataovy drafitra ny hevitra iray manontolo
Iray hevitra momba ny raharaham-barotra Na kely na lehibe dia mila FANDRINDRAMPITERAHANA manokana sy tonga lafatra ho anao. Manao drafitra fandraharahana antsipiriany ary mampihatra azy ireo amin’ny fomba hentitra, dia hanampy anao hahomby tsy ho ela hevitra momba ny raharaham-barotra ny ahy.
9. Tezao ny fahaizanao mamorona
Nandritra ny dingana fanorenana a hevitra momba ny raharaham-barotra vaovao, tsy tokony ho teritery na hentitra loatra ianao amin’ny fisainanao. Mila mamela ny sainao ho malalaka sy mamorona ianao. Noho izany, 123job dia hizara aminao fomba sasany hanentanana ny famoronana sy ny fitomboana hevitra momba ny raharaham-barotra.
Mandeha an-tongotra: Ny siansa dia nanaporofo fa ny mandeha an-tongotra dia mampitombo ny fiasan’ny atidoha, ny fandehanana imbetsaka isan-kerinandro dia tsara ho an’ny fahasalamanao ary manampy amin’ny famoronana hevitra tsara.
Tsidiho ny fivarotana: Afaka mandeha any amin’ny magazay lehibe ianao, indrindra fa ny toeram-pivarotana. Eto, dia hanome anao fomba fijery tena misy momba ny vokatra sy ny mpanjifa, izay tsy hitanao amin’ny boky, kahie… na aiza na aiza.
Miresaha amin’ny olona maro mba hanamafisana ny fahalalanao amin’ny sehatra samihafa: Miresaha ary mifanakalo amin’ny olona avy amin’ny indostria samihafa, izay hanaisotra anao amin’ny fomba fisainana tery ary hanome anao fampiroboroboana matanjaka amin’ny FAHAIZANA ny famoronanao.
10. Avelao hiala sasatra ny tenanao
Maro no mihevitra fa tiany ny a hevitra momba ny raharaham-barotra Ny fahombiazana dia manery anao “hanome ny atidohanao hieritreritra”, na izany aza, hevitra mifanohitra tanteraka amin’ny fiasan’ny atidoha izany. Raha avelanao haka aina ny atidohanao,hevitra momba ny raharaham-barotra hitsangana mafy. Mandra-pahatongan’izany, esory ny olana mifandraika amin’ny raharaham-barotra ary mamorona fanelingelenana ao an-tsainao mba hifantohana amin’ireo zavatra tianao.
Jereo koa: Hevitra ara-barotra ambany kapitaly mitondra fidiram-bola lehibe amin’ny 2020
Rehefa miala sasatra ny atidohanao hevitra momba ny raharaham-barotra nohazavaina tamin’izay fotoana izay
II. Tombano ny hevitra fanombohana
1. Tombano ny tanjakao sy ny fahalemenao mifandraika amin’ny drafitrao
Nataonao FANDRINDRAMPITERAHANA mahazo iray hevitra ara-barotra lehibe, fa tsy misy fomba hanaovana izany. Alohan’ny handehananao dia diniho raha tena zakanao ny manenjika hevitra momba ny raharaham-barotra izany na tsia. Raha tsy tratra izy ireo, tsy ilaina amin’ny fampiharana, dia mila manilika azy ireo avy hatrany ianao na manandrana manova ny hevitra momba ny raharaham-barotra ho azo ampiharina kokoa.
2. Mikaroha hevitra mitovy
Raha ny marina, ny hevitra momba ny raharaham-barotra Tsy mahazatra ny dika mitovy. Noho izany, na dia manana hevitra ara-barotra tonga lafatra aza ianao, dia tokony ho fantatrao raha tena tany am-boalohany izy io, amin’ny fampiasana milina fikarohana an-tserasera.
3. Fikarohana mpifaninana
Raha misy mpifaninana hevitra momba ny raharaham-barotra Miaraka aminao, aza taitra fa farito ny paikady hifaninanana ara-drariny sy hanomezana vokatra tsara kokoa. Ny fomba tsara sasany hikarohana ireo mpifaninana aminao dia: Manjary mpanjifan’ny mpifaninana aminao, miresaha amin’ny mpanjifany, ary jereo ny lazan’ny mpifaninana aminao.
READ Review sách: Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao | Anybook.vn
Fikarohana mpifaninana – ny fomba hahazoana anao hevitra momba ny raharaham-barotra mandresy ny hazakazaka an-tsena
4. Mitadiava mpiara-miasa amin’ny fiaraha-miasa
Vao nanomboka niasa aho hevitra momba ny raharaham-barotra Mandra-panombohana orinasa dia mila miara-miasa amin’ny mety ho mpiara-miasa hafa. Ny fandraisana anjara amin’ny fiaraha-miasa dia hanampy anao hameno ny banga sy hanorina orinasa matanjaka kokoa.
5. Mitadiava mpanjifa mety
te hevitra momba ny raharaham-barotra ny fahombiazany,fitadiavana mpanjifa Asa tena ilaina tokoa izany. Miorina amin’izany dia azonao atao ny faritra mpanjifa mety ho an’ny tenako hatramin’ny fotoana nipoiran’ny hevitra. Ny fomba mahomby sasany hitadiavana mpanjifa mety dia:
Mitadiava mpanjifa amin’ny telefaona.
Mampiasà milina fikarohana.
Manaova doka amin’ny sehatra Facebook.
Mandraisa anjara amin’ny hetsika ivelan’ny aterineto, fampirantiana, foara…
Mandefa vaovao amin’ny tranokala, forum…
Jereo mivantana ny mpanjifa.
6. Fantaro ny loza mety hitranga sy ny sakana
Na inona na inona raharaham-barotra, na inona na inona hevitra momba ny raharaham-barotra Na dia lavorary toy inona aza izany, dia misy singa mampidi-doza sy sakana ao anatiny. Mba hampihenana ny risika dia mila mitadidy ireto manaraka ireto ianao:
Tokony hiara-hiasa amin’ny olona atokisanao: Ny mpiara-miasa na mpamatsy ratsy dia hitondra fahavoazana be amin’ny orinasanao. Mba hisorohana an’io olana io, miaraha miasa amin’olona heverinao fa azo itokisana.
Fiarovana ara-bola alohan’ny hirosoana: Betsaka ny orinasa tsy nahomby hevitra momba ny raharaham-barotra noho ny tsy fahampian’ny renivola fotsiny. Noho izany, tokony hiantoka ny lafiny ara-bola ianao mba hisorohana ny trosa sy ny bankirompitra.
Vonona ho amin’ny fanovana: Tsy hanaiky velively ny hevitra momba ny fandraharahana ny tsenamandà ny fanavaozana. Mba hifaninana sy hivoatra amin’ny fotoana maharitra dia tokony ho vonona hiova ianao rehefa ilaina.
Mitsangàna ao anatin’ny lavaka mangitsokitsoka : “Renin’ny fahombiazana ny tsy fahombiazana”, koa raha lavo ianao dia aza mihevitra fa ho fiafarana izany, fa miezaha mandresy mba hahitana fahombiazana.
Jereo koa: Hevitra ara-barotra miavaka eto amin’izao tontolo izao
7. Famaritana ny maha-mety ny tetikasa
Misy lafin-javatra tsy tambo isaina tokony hodinihina mba hahafantarana hevitra momba ny raharaham-barotra na azo atao na tsia. Mba diniho tsara ireto manaraka ireto mba handraisana fanapahan-kevitra tsara indrindra:
Avereno jerena ny fanadihadiana rehetra sy ny fikarohana natao: Ataovy marin-toetra amin’ny tenanao, aza mandresy lahatra ny tenanao fa manaiky ny vokatra ny tsena.
Ny haavon’ny fifaninanana: Makà fotoana hamaritana ny haavon’ny fifaninanana eo amin’ny tsena, ataovy ny fitsambikinana tsara indrindra raha oharina amin’ny fifaninanana.
Manaova fanadihadiana momba ny fandaniana: Raha hevitra momba ny raharaham-barotra Raha toa ka avo loatra ny vidin’ny fampiasam-bola, dia mila mitandrina ianao mba hisorohana ny tsy fahombiazana mampalahelo.
8. Omeo isa ny hevitrao
naoty hevitra momba ny raharaham-barotra ampio ny fampiasam-bola hifantoka tsara kokoa
Rehefa misy mihoatra ny iray hevitra momba ny raharaham-barotra, mila mamantatra sy manisa laharana izay hevitra tsara indrindra ianao. Ny fandaminana ny hevitrao dia manome anao ny fiadanan-tsaina izay nomenao ny fifantohanao, ny ezaka rehetra, ny fandaniana ary ny fotoananao. Ny hevitra momba ny raharaham-barotra etsy ambany, mila esorinao na hatsaraina bebe kokoa alohan’ny hampiharana.
III. Eo am-pamaranana
Ny lalan’ny fanombohana orinasa dia tsy mora ho an’ny olona rehetra, tsy misy a hevitra momba ny raharaham-barotra Marina fa tsy hatokana ho anao ny tsenam-barotra. Antenaina fa tamin’ny fizarana ny 123job ao amin’ny lahatsoratra etsy ambony dia nanampy anao hahazo ny fomba hamoronana hevitra momba ny raharaham-barotra miavaka, mety ary mahomby indrindra. Mirary anao ho tsara vintana!
Previous: HUBT là trường gì? Ngôi trường này có sức hút như thế nào? | Anybook.vn
Next: Review Sách 3 Người Thầy Vĩ Đại – Chặng Đường Đi Tìm Câu Trả Lời Cho 3 Câu Hỏi Lớn Trong Đời | Anybook.vn